Denmark: Qubuuro ay Muslimiin ku aasan yihiin oo La Jejebiyey
Isniin Feb 13, 2006
25 Qabri oo ay ku aasan yihiin Muslimiin oo la jejebiyey
Afhayeen u hadlayey Booliska (Denmark) oo magaciisa la yiraahdo Anders Hansen ayaa sheegay in la jejebiyey dhagxaanta qubuuraha Muslimiinta ee ku yaal magaalada Esbjerg.
Esbjerg waa magaalada shanaad ee ugu weyn dalka Denmark waxayna qiyaasti 250 km galbeed ka xigtaa caasimada Copenhagen.
"Ma ogin cidda arrintaas ka dambeysey" ayuu yiri afhayeenka booliska, oo intas ku daray weerarka qubuuraha loo geystey in uu dhacay gelinkii dambe ee Sabtidii ama ama gelinkii hore ee Axadii (Feb 12).
Aagga qubuuraha waxaa ku yaal qubuuro Kirishtaan iyo kuwo Muslimiin ah, waxaana la jejebiyey qubuuraha Muslimiinta oo keliya, ayuu yiri Afhayeenka Boolisku.
Arrintani waxa ay dhacday xilli xasaasi ah oo carada Muslimiinta daafaha dunida ay ku wajahan tahay sawir gacmeedyadii uu daabacay wargeys ka soo baxa Denmark.
Ra'iisul wasaaraha Denmark, Anders Fogh Rasmussen, ayaa arrintaas si kulul u cambaareeyey, waxana uu yiri "waxaan si xoog leh u cambaaraynayaa ficilkaas foosha xun, waxaana ka xumahay in la xumeeyo qubuuraha Muslimiinta."
Dhanka Faransiiska wararka ka imanaya waxa ay tibaaxeen in magaca Nebi Muxamed NNKH uu noqday kan loogu hadal haynta badan yahay. Waxaana wargeysyada dalkaasi ay bogagooda hore maalmahan ku qorayeen cinwaano ay kamid yihiin "Xaqiiqada Islaamka France," "Kor u kaca islaamka", "Islaamnimo... Maxay diintani sidaas degdega ah ugu faaftay?".
Waxaa kale oo dalka France aad kor ugu kacay raadinta Tarjumada Quraanka Kariimka iyo buugaagta ka hadlaya Islaamka, kuwaas oo dadka Faransiisku ay danaynayaan in ay wax ka ogaadaan.
Dhanka Ciraaq waxaa maanta Telefeshinada Caalmka hareeyey Video lagu sheegay in laga duubay Askar British ah oo garaacaya dhallinyaro reer Ciraaq ah (magaalada Basra). Halkan ka daawa Vedio-ga... CBC
ISHA: CBC, IOL, Aljazeera